Pew Research Center Info. About. What's This?
ⓘ Pew Research Center
Ny fihetsiketsehana karismatika vaovao dia firehanny kristianisma ara-pilazantsara izay manandratra avo ny fanomezanny Fanahy Masina. Nanomboka tao Etazonia taminny fanombohanireo taona 1980 izany fihetsiketsehana izany. Maro ireo fiangonana niforona maneran-tany vokatrio fihetsiketsehana io. Ny batisanny Fanahy Masina nolazaini Jesosy mialoha sy ny fanomezanny Fanahy Masina sivy dia ivonny finoana ao aminio firehana io. Ny foto-kevitry ny fihetsiketsehana karismatika evanjelika dia noraisinireo Karismatika vaovao nefa naitany sady notovonany endrika teolojika fanampiny toy ny ady ara-pana ...
Ny fihetsietsehana karIsmatika evanjelika na fihetsiketsehana karismatika ara-pilazantsara dia firehanny kristianisma evanjelika izay manandratra avo ireo fanomezanny Fanahy Masina. Nanomboka tao Etazonia taminny taona 1960 izy io ka nisy akony tao aminny fiangonana rehetra na protestanta na katolika na evanjelika ary nandray anjara taminny fiforonanny fiangonana evanjelika tsy miankina maro. Miavaka aminny pentekotisma io fihetsiketsehana io noho izy tsy manao ny fiteny tsy fantatra ho hany porofonny batisanny Fanahy Masina izay nambarani Jesosy mialoha sady manome toerana lehibe ny fahas ...
Ny Kristianisma karismatika na Fihetsiketsehana karismatika dia endriky ny kristianisma sy vondronny fifohazam-panahy nanandratra avo ny asanny Fanahy Masina sy ny fanomezam-pahasoavanny Fanahy Masina ary ny fahagagana araka izay hita indrindra ao aminireo Epistily nosoratani Paoly. Io fifohazam-panahy io dia niseho taminny alalanny fihetsiketsahana telo, dia ny pentekotisma taminny taona 1906 sy ny fihetsiketsehana karismatika evanjelika taminny taona 1960 ary ny fihetsiketsehana karismatika vaovao taminny taona 1980. Araka ny tarehimarika nomenny World Christian Encyclopedia dia miisa 78 ...
Ny Fiangonana kongregasionalista dia fiangonana protestanta manaraka ny fombanny Fiangonana nohavaozina izay mampihatra ny fomba fandaminam-piangonana atao hoe kongregasionalisma ka ny paroasy tsirairay dia mizaka tena. Araka ny tatitra nataonny Pew Research Center dia 0.5%nny Protestanta no mpivavaka kongregasionalista maneran-tany, izany hoe miisa 4 000 eo ho eo. Ao Etazonia sy ao aminny Fanjakana Mikambana no tena ahitana azy indrindra. Ny Fiangonana kongregasionalista dia hita koa any Irlandy, Kanada, Afrika Atsimo, Zelady Vaovao sy any aminny firenena nosy any aminny faritra pasifika ...
Ny Evanjelisma na Evanjelikalisma na Fiangonana ara - pilazantsara dia fihetsiketsehana kristiana milaza fa ny Filazantsara no hany fototra sy filamatry ny finoany. Niforona nanomboka taminny Fanavaozam-piangonana protestanta io fihetsiketsehana io ka nitombo tanjaka nanomboka taminny taonjato faha-18 taminny nipoiranny Metodisma britanika sy ny Pietisma loterana. Ahita azy ny antokom-pinoana maro aminny Protestantisma. Isanny matanjaka ao aminireo Fiangonana evanjelika ny Batisma, ny Pentekotisma, ny Fihetsiketsehana karismatika evanjelika, ny Fihetsiketsehana karismatika vaovao ary ireo ...
Ny fivavahana ao amin ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô dia anjakan ny kristianisma izay arahin ny ankamaron ny mponina. Ao aorian izany ny fivavahan-drazana sy ny fivavahana silamo. Hita ao koa ny fivavahana hafa toy ny jodaisma sy ny hindoisma ary ny bahaisma izay vitsy dia vitsy mpanaraka. Nandritra ny tapany voalohany amin ny taonjato faha-20 dia nihamaro ny fihetsiketseham-paminaniana izay manafangaro singa avy amin ny kristianisman ireo misionera sy singa avy amin ny fivavahan-drazana afrikana, sady nenti-nanohitra ny fanjanahan-tany belza ka nahatonga ny mpanjana-tany hanenjika azy ...
Ny Pentekôtisma, izay atao hoe koa Fihetsiketsehanny Pentekôsta, dia fireham-pinoana kristiana ara-pilazantsara vokatry ny Fifohazam-panahy notarihinny pastora amerikana Charles Fox Parham sy William Joseph Seymour tao Etazonia taminny taona 1906. Io fihetsiketsehana io dia manana izao toetra izao: manome lanja manokana ny Baiboly, ny fahaterahana indray, ny batisanny Fanahy Masina, ny fanomezam-pahasoavanny Fanahy Masina, ny batisanny olon-dehibe aminny maha vavolombelona an-tsitrapo azy, ny fananana saina tia mamita iraka, ny fanokanan-tena ara-pitondran-tena aminny fiainana, ny fahaleov ...
Ny Pew Research Center dia ivontoeram-pikarohana amerikana manome antontanisa sy vaovao ara-tsosialy. Ao Washington no misy ny foiben-toerany ary ny Pew Charitable Trusts no mamatsy vola ny asa ataony. Ny Pew Research Center dia fantatra noho ireo antontanisa omeny momba ny zava-misy ara-pivavahana maneran-tany.
1. Fizarànny fikarohana ataony
Ny Pew Research Center dia manatanteraka ny asany aminny alalanny fizaràm-pikarohana fito:
Global Attitudes & Trends Fihetsika sy firehana eran-tany;
Social & Demographic Trends Firehana ara-piarahamonina sy ara-panisam-bahoaka.
Internet, Science & Tech Internety sy siansa ary haitao;
Hispanic Trends Firehanny mponini Amerika miteny espaniola;
Religion & Public Life Fivavahana sy fiainam-bahoaka;
Journalism & Media Asa fanaovan-gazety sy haino aman-jery ;
U.S. Politics & Policy Politika sy lalàna amerikana;
mpino pentekotista tamin ny taona 2011 araka ny tarehimarika omen ny Pew Research Center Tamin ireo taona 1960, taorian ny fiantombohan ny Fihetsiketsehana
ny mpino no heverina. Tsy fantatra marina ny isan izy ireo: ny Pew Research Center dia manambara fa 1, 5 n ny mponina ao amin ny Repoblika Demôkratikan
silamo no mampiasa izany fiteny izany. Ny fikarohana nataon ny Pew Research Center tamin ny taona 2010 dia manambara fa ny 1, 1 n ny mponina eto Madagasikara
zavatra atao hahazoana famelan - keloka. Araka ny tarehimarika omen ny Pew Research Center dia miisa any amin ny 279 000 000 any ho any ny mpino pentekotista
any Etazonia io fiangonana io. Tamin ny taona 2015 dia nilaza ny Pew Research Center fa ny 1, 4 ny mponin i Etazonia dia mpinon ny ELCA Izy no fiangonana
Department of State tamin ny taona 2011, fa 4, 5 kosa izany hoy ny Pew Research Center tamin ny taona 2010. Izany fivavahan - drazana izany dia mino fa andriamanitra
Fivavahana ao aminny Repoblika Demôkr ..